I-Caral Supe no-Norte Chico: Imiphakathi yaseMelika yokuqala
I-Caral Supe okanye i-Norte Chico Impucuko eMzantsi Melika
Kutheni Kukho Amagama Amabini Kulo Mbutho WasePeru Peruvian?
I-Caral Supe okanye i-Norte Chico (i-Little North) Amasiko ngamagama amabini abavubukuli baye banikezela uluntu olunzima olufanayo. Loo mphakamo wasukuma kwiintlambo ezine enyakatho-ntshona yePeru malunga neminyaka engama-6 000 edlulileyo. Abantu baseNorte Chico / iCaral Supe bakhela iindawo zokuhlala kunye nezakhiwo ezinkulu kwiintlambo ezivela kwicala elincinci lasePacific, ngexesha le- preceramic VI kwixesha lama-Andean, ama-5 800-3,800 cal BP , okanye phakathi kwe-3000-1800 BCE
Kukho ubuncinane iindawo ezingama-30 zezinto zakudala ezichazwe kulo luluntu, ngasinye sinemimandla emikhulu, kwaye iiplaza ezivulekile. Amaziko amasiko onke ahamba ngamahektha angama-hektare, kwaye onke aphakathi kwimilambo emine yomlambo, indawo yeekhilomitha ezili-1,800 kuphela (okanye iikhilomitha ezili-700 eziqhelekileyo). Kukho indawo ezincinci ezincinci kule ndawo kunye nabani abaneenkalo ezinzima kwiinkalo ezincinci, ukuba abaphengululi batyhicilele njengabamelela indawo apho iinqununu eziphezulu okanye amaqela angamaqela angadibana kunye ngasese.
Indawo yase-Norte Chico / iCaral Supe yezinto zakudala inemihlaba ekhuselekileyo kangangokuba abantu abakwiziko elikhulu bayakwazi ukubona amanye amaziko amakhulu. I-Architecture phakathi kweendawo ezincinci ziquka izinto ezinqabileyo eziqhelekileyo, ezibandakanya izakhiwo ezincinane zesikhewu phakathi kweziqulatho ezinkulu zeplani kunye nezikhala zeetyhula.
Isiza ngasinye siqulethe phakathi kwimizi-mitha yesigxathu esine-volume ukusuka kwi-14,000-300,000 cubic meters (18,000-400,000 cubic yards). Iziqwenga zesikhulumi ziyizakhiwo zelitye ezisetyenzisiweyo ezizakhiwe ngee-2-3 m (6.5-10 ft) iindonga ezigciniweyo ezigciniweyo ezizaliswe ngentlangano yomhlaba, iindawo ezikhutshweyo, kunye neengxowa ezikhethiweyo ezibizwa ngokuba yi-shicra equle ngamatye.
Amanqamzana esiteji ahluka ngobukhulu phakathi kunye nakwiindawo. Kuphezulu kwimiba eninzi iindawo ezifakwe emacaleni ezilungiswe ukuba zenze u-U ngokujikeleza i-atrium evulekile. Izitebhisi zikhohla ukusuka kwi-atria ukuya kwi-playas ezijikelezayo zivela kwi-15-45 m (50-159 ft) ngaphaya kwe-1-3 m (2.3-10 ft) enzulu.
Uphando lokuqala oluphambili lwaqala ngawo-1990, kwaye ukuhlala kukaCaral Supe / Norte Chico kwakukho kwingxoxo malunga nexesha elithile. Ekuqaleni, uluntu lucatshulwa ukuba lwakhiwe ngabadobi-abaqobi bezilwanyana, abantu abavuna iziqhamo zityalo kodwa ngokuthe ngqo baxhomekeke kwizibonelelo zamanxweme. Nangona kunjalo, ubungqina obongezelelweyo ngendlela ye-phytoliths, impova , i-starch grains kwizixhobo zamatye, kunye ne-dog kunye ne- coprolite yabonisa ukuba iintlobo ezahlukeneyo zezityalo ezibandakanya ummbiwa zinyuka kwaye zixhaswa ngabemi.
Abanye abahlali bamanxweme baxhomekeke ekulobeni, abantu abahlala kwimimandla yangaphakathi kude nobunxweme batyala izityalo. Ukutya okukhuliswe yi-Norte Chico / i-Caral Supe abalimi kuquka nemithi emithathu: i-guayaba (i- Psidium guajava ), i- avocado (i- Persea americana ) ne-pacae ( Inga feuillei ). Iziqhamo zeziqhamo zaziquka i-achira (i- Canna edulis ) kunye nama-potato amnandi (i- Ipomoea batatas ), kunye nemifuno yayiquka ummbila (i- Zea mays ), i- chili pepper (i- Capsicum annuum ), iimbotyi (zombini i- Phaseolus lunatus ne- Phaseolus vulgaris ), i- squash ( Cucurbita moschata ) kunye nebhotile i-gourd ( Lagenaria siceraria ).
Ikhothini (i- Gossypium barbadense ) yayilinywa ngamanatha okuloba.
Iingcali Iingxabano: Kutheni Bakha Izakhiwo?
Ukususela kuma-1990, amaqela ahlukeneyo ahlukeneyo aye ahlakulela ngokubanzi kwingingqi: i-Proyecto Arqueológico Norte Chico (PANC), ekhokelwa ngumvubukuli wasePeruvia uRuth Shady Solis, kunye neProjekthi yeCaral-Supe, ekhokelwa ngabavubukuli baseMelika uJonathon Haas kunye neWinifred Creamer. La maqela amabini ahluke ukuqonda kweentlanga, eziye zabangela ukuba kubekho ukungqubana.
Kukho amanqaku amaninzi okubambisana, ngokugqithiseleyo ukukhokelela kumagama amabini ahlukeneyo, kodwa mhlawumbi umlinganiselo ogqithisileyo phakathi kwezinto ezimbini eziguquguqukileyo ngukuthi okwangoku ungaxiliswa kuphela: yintoni eyenza abazingeli abahambahambayo bezakhiwo babe nokwakha izakhiwo ezinkulu.
Iqela elikhokelwa nguShady libonisa ukuba uNorte Chico unyanzelisa inqanaba elincomekayo lenhlangano ukwenza inzululwazi zakhiwo.
I-Creamer kunye neHaas zibonisa ukuba endaweni yokuba izakhiwo zeCaral Supe ziyimiphumo yemibutho eyadibanisa uluntu oluhlukeneyo ukudala indawo yendawo yokuhlala kunye nemihango yomphakathi.
Ngaba ukwakhiwa kwezakhiwo zokwakha eziyimfuneko kuyimfuneko ukuba inhlangano ehlelwe ngumgangatho woluntu? Kukho izakhiwo ezinkulu eziye zakhiwa ngamaqela ase-Pre-Pottery neolithic aseNtshona Koloni njengeJeriko kunye neGobekli Tepe . Kodwa ke kunjalo, ukuchonga ukuba yeyiphi inqanaba lezinto eziyinkimbinkimbi abantu baseNorte Chico / iCaral Supe abaye bazimisele.
Enye yezona ziko zorhwebo ezinkulu kwiziko leCaral. Iquka umsebenzi omkhulu wokuhlala kwaye ufumaneka malunga neekhilomitha ezingama-23 (14 mi) ngaphakathi ngaphakathi emlonyeni womlambo waseSupe njengoko ugeleza kwiPacific. Isiza siquka ihektare eziyi-110 (270 ac) kwaye iqulethe iipululane ezinkulu zamanqwelana, ezintathu zeplaza zetyhula kunye nezinye iinduli ezincinci. Inqwelana enkulu kunazo zonke ibizwa ngokuba yi-Piramide iMeya, ilinganisa i-150x100 m (500x328 ft) kwisiseko sayo kwaye i-18 m (60 ft) ephakamileyo. Inqwelwana encinci i-65x45 m (210x150 ft) kunye ne-10 m (33 ft) phezulu. Ixesha likaRadioocarbon ukusuka kwibala leCaral phakathi kwe-2630-1900 kwikota BCE
Zonke izilwanyana zakhiwe kwisithuba esinye okanye ezimbini sakhiwo, esibonisa izinga eliphezulu lokucwangcisa. Ulwakhiwo lwezakhiwo zikawonkewonke lunamanyathelo, amagumbi, kunye namagceke; kwaye iiplazas eziphawulisiweyo zibonisa inkolo yonqulo jikelele.
Elinye indawo ebalulekileyo i-Aspero, indawo ye-hayi yesi-37 (37 ac) kwindawo yomlambo waseSupe, oquka ubuncinane ubuncwane besikhulumi sesigqeba, esona sikhulu se-3,200 cu m (4200 cu yd), simi-4 m (13 ft) phezulu kwaye ihlanganisa indawo engama-40x40 m (130x130 ft).
Ukwakhiwa kwendawo yokubamba i-cobble kunye ne-basalt ibhononti edibaniswe ngodongwe kunye ne-shicra, iziqonda zine-U-shaped atria kunye namaqela amaninzi eendawo zokuhlobisa ezibonisa ukufikelela okunciphisayo. Isayithi ineziqulatho ezimbini ezinkulu zamapulatifomu: i-Huaca de los Sacrificios kunye neHuaca de los Idolos, kunye nezinye izilwanyana ezili-15. Ezinye izakhiwo zibandakanya iiplazas, imihlaba kunye neendawo ezinkulu zenkunkuma.
Izakhiwo zesigidi eAspero, ezifana neHuaca del los Sacrificios kunye neHuaca de los Idolos, zimela ezinye zeempawu ezindala kakhulu zokwakha izakhiwo zaseMelika. Igama elithi Huaca de los Idolos, livela kwiminikelo yesininzi yezenzi (ezichazwa njengezithixo) zibuye zivela phezulu kwinqonga. Ixesha le-radiocarbon le-Aspero liwela phakathi kwe-3650-2420 kwikhilomitha BCE.
Ukuphela kweCaral Supe / Norte Chico
Kungakhathaliseki ukuba yintoni eyenza umzingeli / umqokeleli / abatshali bezokwakha izakhiwo ezinkulu, ukuphela kommandla wasePeruvia kucacile-ukuzamazama komhlaba kunye nokutshintsha kwemozulu kunye ne- El Nino Oscillation Current . Ukuqala malunga ne-3 600 cal BP, uluhlu lweentlekele zemvelo lubethelele abantu abahlala kwiiVu kunye neziqithi ezikufutshane, ezichaphazela iindawo zokuphila zaselwandle nasemhlabeni.
> Haas J, uCreamer W, Huamán Mesía L, Goldstein D, Reinhard KJ, kunye noVergel Rodríguez C. 2013. Ubungqina bombona (iZea mays) kwi-Archaic ezayo (3000-1800 BC) kwingingqi yaseNorte Chico yasePeru. Iinkqubo zeSizwe seSizwe seSayensi 110 (13): 4945-4949.
> Piscitelli M. 2017. Iindlela ezihambelanayo nokuHlezeka kweNtlalo kwingingqi yaseNorte Chico yasePeru. Ku: Chacon RJ, kunye neMendoza RG, abahleli. Umthendeleko, indlala okanye ukulwa? Iindlela ezininzi zokudibanisa kweNtlalo. Cham: I-Springer International Publishing. p 393-415.
> Sandweiss DH, kunye noQuilter J. 2012. I-collation, i-correlatoin, kunye ne-causation kwi-prehistory yasePeru. Ku: Cooper Cooper, kunye namaSpredishithi P, abahleli. Ukusinda kweNdalo engqongqo engqongqo: Izimpendulo kwi-Archeology . I-Boulder: IYunivesithi yeColorado. p 117-139.
> Sandweiss DH, uShady Solís R, uMosesley ME, uKeefer DK, kunye no-Ortloff CR. 2009. Utshintsho olusingqongileyo kunye nophuhliso loqoqosho kwiNxweme yasePeru phakathi kwama-5 800 no-3 600 kwiminyaka edlulileyo. Iinkqubo zeSizwe seSizwe seSayensi 106 (5): 1359-1363.
I-Capacocha Ceremony - Ubungqina bemihlatshelo ye-Inca Child
Yiyiphi Inzululwazi Eyifunde Ngenkxwaleko yaseAthene
Izinto ezi-10 eziphezulu zokumazi ngama-Aztec kunye nobukhosi bazo
I-Beaker Culture - Abalimi bokuqala baseScandinavia
Ixesha leViking - Iimpawu ezibalulekileyo kwiMbali yeVikings yamandulo
"Ukuphuka okukhulu kweSiqithi sase-Prince Edward" Abaqhubi
Ziqhelise ekulungiseni izicatshulwa ezingenasiphelo
Amazwe Alalixoki Kwi-Prime Meridian
IMigaqo yePolitiki yamanzi yaseOlimpiki
Biography kaLydia Dustin